Ny tranon'ny distrikan'ny sekoly dia mamaky ny "taloha sy rava" ary mamerina ny kalitaon'ny fiainana Design endrika Shuangbao
Home / Interior design / Ny tranon'ny distrikan'ny sekoly dia mamaky ny "taloha sy efa rava" ary mamerina ny kalitaon'ny fiainana Design endrika Shuangbao
Ny tranon'ny distrikan'ny sekoly dia mamaky ny "taloha sy efa rava" ary mamerina ny kalitaon'ny fiainana Design endrika Shuangbao
2021 / 08 / 15 FisokajianaInterior design 11181 0
Tetikasa manokana tokoa ity. Nandritra ny andro sy alina lasa izay, nifandray tamin'ny tompon-trano tamin'ny alàlan'ny telefaona finday nandritra ny 1,000 kilometatra mahery izahay. Ary farany, ny fanavaozana ity trano sekoly ity izay 90 metatra toradroa teo alohany dia nitondra ny lohataona izay azy. Na dia niditra tao an-trano aza ny mpampianatra nametraka tamin'ny alàlan'ny hutongs mety, dia gaga izy: “Tsy fantatro izany raha tsy efa hitako. Misy trano tsara tarehy toy izany ao amin'ny trano antitra toy izany. ”
Momba ny "it" tamin'ny lasa
Ity tranga ity dia tetikasa ivelan'ny tranokala any Fuzhou, izay 30 taona ankehitriny. Ny metatra ao anatin'ny suite dia 88 metatra toradroa. Efa antitra ny ao anatiny ary tsy tsara ny jiro. Ny fametrahana ny trano koa dia misy olana. Tsy ampy ny isan'ireo efitrano. Faharoa, fiasa fitehirizana maro no tsy azo ampiharina. Tsy afa-po koa ny fianaran'ny ankizy. Ho an'ny fitaky ny tompon-trano rehetra, ity trano distrikan'ny sekoly ity dia mety manana fiainana hatramin'ny 10 taona. Ary miaraka amin'ny nenitoana monina iray, ny teny voalohany tonga ao an-tsaina rehefa mieritreritra ny tranon'ny distrikan'ny sekoly izahay dia matetika "marimaritra iraisana", satria mitovy hevitra amintsika ny fanaintainana. Misy faritra voafetra, fiainana feno olona. Mbola afaka miresaka momba ny fiainana niainana ve isika?
Na izany aza, aorian'ny famolavolana fanavaozana, ny toerana tsirairay dia manana jiro tsy miankina. Ny habetsaky ny jiro tonga ao amin'ny faritra iraisana dia maro karazana ny zoro. Ny toerana dia nesorina daholo ny rindrina ary nomanina drafitra indray ny lamina. Izy io dia manome fahafaham-po ny asan'ny efitrano 3, efitra fandroana 2 ary efitrano fianarana sy trano fandraisam-bahiny, mahatsapa ny fiaraha-miasa ny fomba azo ampiharina sy ny fomba kanto. Ny habetsaky ny fitehirizana dia nitombo be koa ary ny fampiasana ny habaka dia nitombo avo roa heny. Izany dia namorona traikefa niainana tsara kokoa ho an'ny tompon-trano. Tamin'ny andro nahavitana azy, dia nilaza ilay tompon-trano hoe: “Tena tsara tarehy, tsy te hivarotra azy akory aho avy eo.”
"Famakiana" ny olana fanavaozana ny trano taloha
Ny habaka voalohany amin'ity tranga ity dia ny tsy fahampian'ny jiro. Taorian'ny dinika lalina nataon'ny mpamolavola dia nesorina ireo rindrina rehetra azo nesorina. Ny mpamorona dia nampiasa ny firafitry ny peratra peratra mba hametrahana ny habaka mba hiantohana ny haavon'ny toerana. Mandritra izany fotoana izany, eo anelanelan'ny habaka marobe dia nampiasa vavahady misokatra ny mpamorona hamahana ny olan'ny jiro. Io dia mamela ny fampidirana hazavana amin'ny lalana maro amin'ny faritra iraisana ary mahatonga ny trano ho mora kokoa amin'ny resaka fivezivezena.
Teo am-piandohana dia nilaza ny tompony fa tsara ny manana efitrano fianarana ho an'ny biraony. Ka tsy sarotra taminay io fangatahana kely io. Natambatra ho iray ny efitrano fandraisam-bahiny sy ny fianarana. Indraindray ny olon-dehibe dia afaka miasa ao an-trano, ary indraindray ny ankizy dia afaka manao ny entimodiny. Ny rivo-piainana ianarana ao an-trano, ny fitahirizana fahalalana be dia be, manomboka izao.
Noho ny haben'ny trano dia nofidina ny fanaka ho milamina sy mifintina ary mora mihetsika. Izany dia mahatonga ny hetsiky ny efitrano ho mora kokoa. Ny firafitra fanaka mihidy dia mampitombo ny fifandraisan'ny fianakaviana. Ny lafiny iray manontolo eo an-tampon'ny fitoeram-boky misy varavarana kabinetra vita eto ambany mba hotahirizina. Ny tampon'io dia tavela ho fitoeram-boky malalaka. Ny boky sy ny fitaovan'ny fianakaviana rehetra dia voatahiry eto. Rehefa dinihina ny teti-bola, dia napetrakay teo an-tampon'ny fatam-boky. Nanangana jiro rindrina kely 2 ihany koa izahay mba hamenoana ny kitapo. Hanampy ny mponina hahita ny fanangonana boky tsara kokoa izany.
Ny peratra dia afaka mitazona fahatsiarovana kely isan-karazany nongotan'ny tompony tamin'ny diany, sy ny fitaratra haingon-trano misy singa sinoa. Ho fanampin'ny haingon-trano dia alefaso tsara kokoa ny jiro ary ampidirina ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny. Mampitombo ny fahatsapana ny habakabaka ihany koa izany. Ny jiro sy ny rivotra dia miaraka ao amin'ity trano “antitra sy rava” ity.
Raha jerena ny refin'ny habaka sy ny fiarovana ny fandehanana, dia miolaka ny ankamaroan'ny fanaka. Mamonjy toerana ary tsy mikasika ny tongotra. Mba hamoronana fomba fiaina tsara kokoa ho an'ny tompon-trano, dia nanisy fatana tao amin'ny efitrano iray izay hanana trano efa zato taona izahay. Manantena izahay fa isaky ny mandrehitra am-patana ny tompon-trano, mihaino ny mozika Retro ary mahita ny lelafo mandihy, dia toy ny teraka tamin'ny fiainana Paris tao anaty lakile kely io.
Fahafahana tsy manam-petra amin'ny fianarana
Amin'ity trano fianarana ity dia handany ny ankamaroan'ny fotoana amin'ny ankizy izahay, ka nesorina tsy ho ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny ny fahitalavitra. Ao amin'ny safidin'ny seza, dia nandahatra fipetrahana mipetraka izahay. Ny iray dia ny mamela tsipika tsara kokoa ho an'ny habaka ary mitahiry faritra malalaka. Faharoa, afaka manome fotoana bebe kokoa ny fianakaviana hifandraisana.
Ao amin'ny faritra misokatra ny fandalinana dia manitatra hatrany amin'ny rindrin'ny efitrano fandrakofana ny fitoeram-boky. Na aiza na aiza alehan'ny olona dia "fianarana". Ny rindrin'ny rakotra boky mainty terebinta dia manana fahaizany mitahiry. Ity dia afaka mitazona boky ary koa firavaka sy knick-knacks sasany. Sokafy ny "varavarana miafina" ao amin'ny fitoeram-boky, izay ny efitrano ipetrahan'ny nenitoany matetika. Ny varavarana roa sosona dia ampiasaina amin'ny vera kanto, mba ahafahan'ny hazavana ampidirina ao amin'ny efitrano fatoriana kely ihany koa. Ao amin'ny efitran'ilay nenitoany koa dia apetraka ny ambainy. Rehefa mila habaka manokana izy dia afaka manidy azy irery ihany koa.
Famerenana ny tsipika fisakafoanana
Ilay trano 90 metatra toradroa mitazona ny haavony tany am-boalohany araka izay azo atao. Ny efitra fisakafoana dia nofinidy manga manga. Ny ranomasina sy ny lanitra dia iray loko, ary lehibe ny lanitra. Mampahatsiahy ny olona ny lanitra manga sy ny rano manga any Saipan amin'ny fahavaratra izany, izay loko manasitrana izay mahatonga ny olona hahatsapa ho milamina kokoa. Ny felam-boninkazo serizy mavokely ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny dia mazava, milalao ary mahafinaritra, ary ny loko 2 dia mifangaro mba hamorona ambaratongam-pahitana amin'ny ambaratonga samihafa ary hahatonga ny habaka voahodidin'ny rivo-piainana romantika.
Raha jerena ny tsy fisian'ny toerana fitahirizana ao an-dakozia, dia namboarinay araka izay azo atao ny rindrina mba hanaovana efitrano fitehirizana anaty. Io dia ahafahanao mametraka kojakoja fanaovana mofomamy, serealy sakafo maraina na kitapo kafe sy dite, sns. Manatsara kokoa ny fiasan'ny lakozia izany. Rehefa tonga ny namana dia alefanay ny stereo taloha ary milalao ny feony frantsay ao amin'ity efitrano fisakafoanana kely ity isika, toy ny amin'ny trano kely any Paris ihany. Fotoana mety hialana sasatra izao.
Ny faritra ankapobeny amin'ny faritra fisakafoanana dia tsy dia lehibe loatra. 1.1m latabatra boribory 3m dia ampy ho an'ny fianakaviana misy olona 4-XNUMX. Ny varavarana misosa amin'ny lakozia dia misy famaranana fitaratra. Izany koa dia hanitarana ny faritra fisakafoana amin'ny fahitana. Ny varavarana mihetsiketsika dia azo akatona koa mba hanokanana ny menaka sy ny setroka, izay tena mety sy azo ampiharina.
Nentina tany amin'ny efitrano fandriana ny vano
“Rehefa manokatra ny varavaran'ny efitrano fatoriana ianao, dia hafa tanteraka ny lokony. Jiro sinoa, jiro mena antitra miavaka, ondana volamena volory vita amin'ny volory, tsara tarehy daholo ny zava-drehetra raha ny fahitan'ny maso azy! Ny endrika amam-baravarana miafina dia mamonjy toerana ao amin'ny efitrano fatoriana maotina. ”
Ilay efitrano fatoriana tany am-boalohany dia tsy nanana faritra fandraisam-bahiny mahaleo tena. Taorian'ny fizarana zona mandanjalanja dia nisy efitrano fidiovana kely nampiana tamin'ny findramana faritra kely amin'ny faritra iraisana. Nampidirin'ilay mpamorona endrika ihany koa ny lavarangana. Manodidina ny efitrano ny lafiny telo amin'ny varavarankely fitaratra hitondra hazavana voajanahary. Na avy aza ny orana dia tsy maizina mihitsy raha tsy misy jiro. Eritreritra maro no napetraka tao amin'ny fividianana fanaka malefaka. Na ny safidin'ny switch aza tsy nitovy.
Ny karazan-trano tany am-boalohany dia trano fandroana iray ihany. Mba hampisondrotana azy io bebe kokoa, nindrana ny ampahany amin'ny lavarangana sy ny efitranon'ny ankizy ireo mpamorona ary namboarin'izy ireo tamim-pahakingana izy io. Namboarin'izy ireo ny koveta fandroana ary nilentika tao anatiny. Mba hisorohana ny endrika tsy dia fahita amin'ny varavaran'ny trano fidiovana manoloana ny fandriana, dia nataonay varavarana fandroana endrika tsy hita maso ny varavarana fandroana. Tsara sy azo ampiharina ity, mamono vorona roa amin'ny vato iray.
“Hitombo” ny efitranon'ireo ankizy
Ny loko manga an-dranomasina dia nitarina koa ho an'ny efitranon'ny ankizy. Ny fanaka ao amin'ny efitrano ho an'ny ankizy manontolo dia natao tsara. Ny switch dia voafantina tsara ihany koa. Manome fahalianana bebe kokoa amin'ny famolavolana antsipiriany. Ny famolavolana mifangaro ao amin'ny lalimoara, ny kabinetra mihantona ary ny fandriana tatami dia manatsara ny fampiasana ny habaka iray manontolo. Na ny arimoara sy ny toerana eo ambanin'ny fandriana tatami dia azo ampiasaina amin'ny fitehirizana sy fitehirizana. Betsaka ny talantalana misokatra no natokana, hanomezana toerana manokana ny zaza. Io dia ahafahan'ny zaza mampiseho ny fialamboliny sy ny tsirony amin'ny fiainana rehefa lehibe izy.
Manana sary hosodoko sy fiaramanidina modely ho azy ny zaza. Te hampiseho ny Gadgetany rehetra koa izy. Ny mpamorona dia nampifangaro ny faritra sisa, mianatra ary milalao, mamela ny faritra asa lehibe indrindra. Ho an'ny ankizy kely kokoa, ny fanaka ao amin'ny efitrano dia tsy tokony ho avo loatra. Raha te hamboly fahaleovan-tena ho an'ny ankizy ianao dia makà kilalao, vakio ny boky, manaova sary ary mahazoa akanjo, azafady mba omeo azy ny haavon'ny toerana ananany noho ny fahaizany manambola. Ny faritra fampisehoana semi-open ihany koa dia toa tsy mikorontana. Izany koa dia afaka mandray an-tsaina ny dingana tsirairay amin'ny fitomboan'ny zaza.
Manomboka eo am-baravarana “fiovana lehibe”
Ny karazana trano voalohany dia tsy manana efitrano fidirana. Tsy nisy ny fitehirizana kiraro taorian'ny nidirany teo am-baravarana, mainka fa ny fahafaha-mipetraka sy manova kiraro. Taorian'ny nanamboaranay ny lamina, ny ampahatelon'ny trano fidiovana tany am-boalohany dia natokana ho an'ny fidirana. Ny vavahady mihorona no namboarina ho fizarazarana eo amin'ny efitrano fandraisam-bahiny sy ny efitra fisakafoana mba hamoronana fidirana misaraka. Ny kabinetra kiraro mainty sy fotsy ambony sy ambany koa dia mahazaka kiraro am-polony maro.
Tsy dia lehibe ny velaran'ny trano, fa isan'andro kosa dia mila amboarina tsara ny fiainana. Ny efitra fandroana eo akaikin'ny tranom-bahiny koa dia feno eritreritra kely an'ny tompony. Ny fitaratra, ny kabine fandroana, ary na ny boaty savony aza dia nofidian'ny tompony tsara avokoa. Izany dia manome ny fiainana ny faritra fandroana kely.
Ny sary an-tsokosoko eo amin'ny vavahady fidirana dia voafantina tamin'ny andian-tsarimihetsika cole & son. Tia mozika ny tompon-trano. Ity takelaka fanaovana teatra mahafinaritra ity dia maneho tanteraka ny aingam-panahy ananan'ny teatra amin'ny famolavolana. Mandritra ny fotoana ilana ny filan'ny mpiasa an-trano dia mino izahay fa hiara-hiaina ny estetika sy ny zavakanto.
▲ Drafitra ny kisary fandaminana
Teboka sarotra fanarenana.
①Fahasarotana: ny trano fandroana iray dia lasa efitra fandroana roa (tany am-piandohana dia tsy nisy fandroana iray monja ary tsy nilentika izy io. (Ahoana no hamahana ny olan'ny rano sy ny jiro?)
Ilay voalohany dia ilay misy efitra be. (Ny karazan-trano tany am-boalohany dia tsy efitrano fidirana tsy miankina. Ny efitrano fatoriana lehibe koa dia tsy manana efitrano fizahana mahaleo tena. Mila mihaona amin'ny efitrano fandraisam-bahiny + isika handinika ny fomba fizarazarana.)
③ Teboka sarotra: ny faritra iraisana dia ny tsy fahampian'ny jiro. Maizina sy mando ny efitrano (Rehefa voahodidina rindrina fisarahana amin'ny lafiny telo ny efitrano fandraisam-bahiny dia miankina amin'ny varavarankely atsinanana ihany no ianteherany. (Eo amin'ny tontolo maizimaizina mandritra ny taona izy io.)
④ Teboka sarotra: feno tampoka ny tampony. Ny valindrihana amin'ny trano iray manontolo dia hanery ny haavon'ny gorodona. (Aorian'ny fanesorana ireo rindrina, ny toerana rehetra misy tsanganana dia tsy maintsy ihodivirana fa manana hazo kely miampita.)
Famolavolana anatiny / famolavolana jiro / fanaka malefaka miaraka amina endrika / voninkazo
Shuangbao Design dia niara-nanorina an'i Xiao Zhang sy Shuyan Zhou tamin'ny taona 2013. Orinasa mpamolavola miakatra izy io ary misy fisainana endrika vaovao sy samihafa. Manome serivisy famolavolana anatiny, malefaka, famolavolana varotra sy trano. Hainay foana ny nanamboatra fomba maro. Mandritra ny maha-zava-baovao sy mahomby antsika dia mijery ny fomba hanosehana ny fetra sy hanovana ny refy sahaza azy sy ny fifandraisana mifanaraka amin'izany izahay mba hamoronana toerana feno sy mirindra ho an'ireo mpampiasa. Mino izahay fa “tsy manaraka an-jambany ny lamaody ankehitriny izahay, izay mety aminao no tsara indrindra.”
Previous :: Fametrahana zavakanto + singa voajanahary, mitaona sary an-tsaina tsy manam-petra momba ny ho avy | DESIGN MACONWAY Next: Volondavenona + Havoana Cardamom avo lenta, Tanora tanora sy avo lenta | Yuanhe Daqian
2021 / 08 / 15 10873
2021 / 08 / 15 11613
2021 / 08 / 14 11003
2021 / 08 / 14 11990
2021 / 08 / 14 10611
2021 / 08 / 13 10418